ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိ အခွန်အကြောင်း - သင်သိရှိထားရမည့် အရာများ | Australian Taxation Office
ကျွန်ုပ်တို့ အဘယ်ကြောင့် အခွန်ပေးရသနည်း
tax file number (အခွန်ဖိုင်နံပါတ်) တစ်ခု ရယူပါ
သင်၏ TFN ကို လုံလုံခြုံခြုံသိမ်းထားခြင်း
ဩစတြေးလျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးနံပါတ်များ (ABN) မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် ဖြစ်သည်
tax file number declaration (အခွန်ဖိုင်နံပါတ် ကြေညာချက်) ကို ဖြည့်ပါ
စည်းကြပ်ခွန် ဝင်ငွေစာရင်း တင်ပြခြင်း
သင် တင်ပြရန်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ
သင်၏ စည်းကြပ်ခွန် ဝင်ငွေစာရင်းကို ဖြည့်စွက်ပြီး တင်ပြပါ
myTax ကို အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းမှ တင်ပြခြင်း
မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အခွန်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသုံး၍ တင်ပြခြင်း
ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိ အခွန်အကြောင်း - သင်သိရှိထားရမည့် အရာများ
သင့်အနေဖြင့် ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိအခွန်အကြောင်း - သင်သိရှိထားရမည့် အရာများ (PDF, 758KB)This link will downloadafile မိတ္တူတစ်စောင်ကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
အခွန်ဆိုသည်မှာ အောက်ပါတို့အပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက် လူများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ဩစတေးလျနိုင်ငံအစိုးရကို ပေးရသည့် ငွေဖြစ်သည်။
လူမှုဖူလုံရေးနှင့် Centrelink – Services Australia မှ အခြားပေးချေငွေများ။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားများဖြစ်သည့်အလျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခွန်ကောက်ခံငွေများဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးထားသည့် ကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးစနစ်၊ အရည်သွေးမြင့် ပညာရေးနှင့် ရပ်ရွာအသိုက်အဝန်း အဆောက်အအုံအမျိုးမျိုး (ဥပမာ - ပန်းခြံများနှင့် ကစားကွင်းများ) ကို ရရှိခံစားကြရပါသည်။
သင် ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်ငွေ ပမာဏသည် အောက်ပါတို့ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည် -
အခွန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင်မှာ ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား ဟုတ်မဟုတ်
သင့်တွင် အလုပ်တစ်ခုထက်ပို၍ ရှိမရှိ
သင့်တွင် tax file number (TFN) (အခွန်ဖိုင်နံပါတ်) ရှိမရှိ - ဤသည်မှာ ကိုယ်ပိုင်အညွှန်းနံပါတ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းနံပါတ်ကို သင့်အလုပ်ရှင်အား ၎င်းတို့ထံတွင် စတင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ပြီးနောက် ပြောပြသင့်သည်။
သင့်တွင် TFN မရှိမီ အလုပ်စလုပ်ပါက TFN တစ်ခုရရှိရန် သင့်တွင် 28 ရက်အချိန်ရှိပြီး ၎င်းကို သင့်အလုပ်ရှင်ကို ပေးပါ။ သင့်တွင် TFN မရှိပါက သင့်အလုပ်ရှင်သည် သင့်လုပ်အားခမှ အခွန်ကို အမြင့်ဆုံးနှုန်းဖြင့် ဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
အောက်ပါလင့်ခ်တွင်လည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် -
သင်သည် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးဖြစ်ပါက ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် စတင်အလုပ်မလုပ်မီ Department of Home Affairs (ပြည်ထဲရေးဌာန) မှ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ Home Affairs (ပြည်ထဲရေး) မှ ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် မည်သည့်ဗီဇာများကို ခွင့်ပြုထားကြောင်း အပါအဝင် အသုံးဝင်သည့်အချက်အလက်များကို ပေးနိုင်ပါသည်။
အချက်အလက်ပိုမိုသိရှိလိုပါက Home Affairs (ပြည်ထဲရေးExternal Link) သို့ ဆက်သွယ်ပါ (ပြင်ပဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့်လင့်ခ်များ)
သင်၏ tax file number (အခွန်ဖိုင်နံပါတ် TFN)) မှာ သင်၏ ကိုယ်ပိုင်အညွှန်းနံပါတ် ဖြစ်သည်။ TFN တစ်ခု အခမဲ့ရရှိနိုင်သည်။
သင်သည် စတင်အလုပ်မလုပ်မီ သို့မဟုတ် စတင်အလုပ်လုပ်ပြီး မကြာမီအချိန်အတွင်း TFN တစ်ခု ရယူထားသင့်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါက အခွန်ပိုပေးရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှ လူတစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများကို ခွဲခြားသိရှိရန်နှင့် မှတ်တမ်းများ သိမ်းဆည်းထားရန် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် TFNs ထုတ်ပေးပါသည်။
သင်၏ TFN ကို မည်သို့လျှောက်ရမည်မှာ သင့်အခြေအနေများပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
မည်သို့လျှောက်ရမည်နှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက အောက်ပါလင့်ခ်သို့ ဝင်ရောက်ပါ -
TFN တစ်ခု လျှောက်ထားရန်
သင်သည် ဩစတြေးလျသို့ ပြောင်းရွှေ့လာပါက သို့မဟုတ် ဩစတြေးလျတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးသည့် ယာယီနေထိုင်ခွင့် ဗီဇာတစ်ခုကို ကိုင်ဆောင်ထားပါက အွန်လိုင်းမှ TFN တစ်ခု လျှောက်ယူနိုင်ပါသည်။
အွန်လိုင်းမှ လျှောက်ထားရန် အောက်ပါလင့်ခ်သို့ ဝင်ရောက်ပါ -
နိုင်ငံခြားနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများ၊ ရာသက်ပန် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများနှင့် ယာယီအလည်အပတ် သွားလာသူများ - TFN လျှောက်ထားခြင်း
သင့်လျှောက်လွှာကို ဖြည့်စွက်ရာတွင် သင် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကို သက်သေပြသည့် စာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါမည်။
သင်၏ TFN လျှောက်လွှာ လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ဆောင်ရန် 28 ရက်အထိ ကြာမြင့်နိုင်ပြီး သင်၏ TFN ကို သင့်လိပ်စာအတိုင်း ပေးပို့ပါသည်။
သင်၏ TFN သည် ဘဝတစ်လျှောက်လုံး သင့်နှင့်အတူရှိမည်ဖြစ်ရာ လုံခြုံအောင် သိမ်းထားရပါမည်။ သင့်အမည် သို့မဟုတ် လိပ်စာပြောင်းလဲခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်များ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြည်နယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံရပ်ခြား သွားလျှင်ပင် အဆိုပါ TFN ကို သိမ်းထားရပါမည်။
သင်၏ TFN ကို အခြားမည်သူ့ကိုမျှ သုံးခွင့်မပေးပါနှင့်။ သူငယ်ချင်း သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးကိုပင်လျှင် ပေးမသုံးပါနှင့်။ အခြားတစ်ဦးကို အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်း၊ ပေးသုံးခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်းသည် ရာဇဝတ်မှု မြောက်ပါသည်။
သင်၏ TFN ကို -
သင်၏အခွန်မှတ်တမ်းများကို ဆွေးနွေးသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးပါ
သင် စတင်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက် သင့်အလုပ်ရှင်ကို ပေးပါ၊ သို့သော် အလုပ်လျှောက်သည့်အခါ မပေးပါနှင့်
သင့်ဘဏ် သို့မဟုတ် အခြားငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများကို ပေးပါ
Services Australia ကိုပေးပါ
သင်၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော အခွန်ကိုယ်စားလှယ်ကိုပေးပါ
သင်၏သက်ပြည့်အငြိမ်းစားလစာ (သက်ပြည့်အငြိမ်းစားလစာ) ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကို ပေးပါ
အဆင့်မြင့်ပညာရေးချေးငွေအစီအစဉ် (HELP) ကဲ့သို့ ကျောင်းသားချေးငွေ ရရှိရန် သင်၏အဆင့်မြင့်ပညာရေး ထောက်ပံ့သူ သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ် ပေးပါ
သင်၏ TFN ဆုံးရှုံးမှု၊ ခိုးမှု သို့မဟုတ် တလွဲအသုံးချမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ 1800 467 033 သို့ ဖုန်းဆက်ပြီး ချက်ချင်း တိုင်ကြားပါ။
သင်၏ TFN နှင့် အခြား ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသား အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို လုံလုံခြုံခြုံ သိမ်းထားခြင်းသည် တစ်ကိုယ်ရေအမှတ်အသားအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုကို တားဆီးနိုင်ပါသည်။ တစ်ကိုယ်ရေအမှတ်အသားအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုသည် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ရန်အတွက် လူများ၏တစ်ကိုယ်ရေအမှတ်အသား အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အသုံးပြုသည့်အခါ ဖြစ်တတ်သည်။
လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့်အီးမေးလ်များ၊ ဖက်စ်များ၊ SMS နှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများမှာ အလွန်ယုံကြည်စရာ ကောင်းသည့်ဟန်ရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ TFN ၊ စကားဝှက်များ သို့မဟုတ် အခြားအရေးကြီးသည့် အချက်အလက်များကို အီးမေးလ်များ သို့မဟုတ် SMS တွင် မထည့်ပါနှင့်။ သတိထားပါ၊ သင့်အနေဖြင့် ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုမှာ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ဟု သေချာမသိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဆိုင်ရာ သီးသန့်ဖုန်းလိုင်း 1800 008 540 ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။
လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုတစ်ခုကို စစ်ဆေးပါ သို့မဟုတ် သတင်းပို့ပါ။
ScamwatchExternal Link (ပြင်ပဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် လင့်ခ်များ)
ဩစတြေးလျမှာ အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် လူတိုင်း ဩစတြေးလျ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးနံပါတ်များ (ABN) ရှိရမည် သို့မဟုတ် လိုအပ်သည်ဟု သတ်မှတ်မထားပါ။ ABN တစ်ခု ရှိထားခြင်းမှာ သင်သည် -
ကျွန်ုပ်တို့အား သင့်ကိုယ်ပိုင်အခွန်ငွေ ပေးရန် လိုအပ်သည်
သင်၏ကိုယ်ပိုင်သက်ပြည့်အငြိမ်းစားလစာအတွက် ပေးရန် လိုအပ်သည်
သင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပါက အာမခံထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ ဟု ဆိုလိုသည်။
ဩစတြေးလျစီးပွားရေးလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း (ABR)External Link
သင် စတင်အလုပ်လုပ်သည့်အခါ သင့် TFN နှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ၎င်းတို့အား ပြောပြရန် သင့်အလုပ်ရှင်မှ သင့်အား Tax file number declaration (အခွန်ဖိုင်နံပါတ် ကြေညာချက်)(NAT 3092) ကို ဖြည့်ခိုင်းပါမည်။
သင့်အနေဖြင့် အခွန်မည်မျှပေးဆောင်ရမည်ကို တွက်ချက်ရန် ၎င်းတို့မှ ဤကြေညာချက်ကို အသုံးပြုပါသည်။
ကြေညာချက်ကို ဖြည့်စွက်ရန် သင့်မှာ အချိန် 28 ရက် ရှိပြီး ၎င်းကို သင့်အလုပ်ရှင်ထံ ပြန်ပေးရပါမည်။ သင် မဖြည့်စွက်ပါက ၎င်းတို့သည် သင့်လုပ်အားခမှ အခွန်ကို အမြင့်ဆုံးနှုန်းဖြင့်ဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
သက်ပြည့်အငြိမ်းစားလစာမှာ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ အငြိမ်းစားစုငွေစနစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ သင့်အငြိမ်းစားဘဝကို ထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက် သင်အလုပ်လုပ်သည့်လစာမှ ဖယ်ထားသည့် ငွေဖြစ်သည်။
အလုပ်သစ်တစ်ခုကို စတင်လုပ်ကိုင်သည့်အခါ သက်ပြည့် အငြိမ်းစားလစာ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို နားလည်ရန်နှင့် သင်၏အခွင့်အရေးများနှင့် ခံစားခွင့်များကို သိရှိထားရန် အရေးကြီးသည်။ သင် ယခုနှင့် အနာဂတ်တွင် ချမှတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် သင် အငြိမ်းစားယူသည့်အခါ သင့်ဘဝနေထိုင်မှုကို သက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
သင့်လစာအပြင် အဖြစ်မနေစုရသည့် အလုပ်ရှင် သက်ပြည့်အငြိမ်းစားလစာ ထည့်ဝင်မှုများကို ရရှိပါသည်။ ဤထည့်ဝင်မှုများကို ထည့်သွင်းရန် လူအများအပြားတို့သည် ဩစတြေးလျ သက်ပြည့်အငြိမ်းစားလစာ ရန်ပုံငွေကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
အများအားဖြင့် သင်သည် ပြက္ခဒိန်လ တစ်လတွင် လစာ $450 သို့မဟုတ် ယင်းအထက် ရရှိပါက သင့်အလုပ်ရှင်သည် သင့်လုပ်ခလစာ၏ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုကို သင်၏သက်ပြည့်အငြိမ်းစားလစာအကောင့် ထဲတွင် ထည့်ပေးရသည်။
လူတစ်ယောက်စီတိုင်း အောက်ပါတို့ဖြစ်ပါက စည်းကြပ်ခွန် ဝင်ငွေစာရင်း တင်ပြရမည် -
အခွန်နှစ်အတွင်း (ဇူလိုင်လ 1 ရက်မှ ဇွန်လ 30 ရက်အထိ) အခွန်ဆောင်ခဲ့ပါက
သင်၏အခွန်ဆောင်ရမည့် ဝင်ငွေ (Centrelink ထောက်ပံ့ကြေးများ သို့မဟုတ် ပေးချေငွေများ အပါအဝင်) သည် နေထိုင်သူများ အတွက် အချို့သတ်မှတ်အဆင့်များထက် ကျော်လွန်သည် - – စည်းကြပ်ခွန် ဝင်ငွေစာရင်း တင်ပြရန် လိုပါသလား ကို ကြည်ပါ။
သင်သည် နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အခွန်နှစ်အတွင်း ဩစတြေးလျတွင် $1 သို့မဟုတ် ယင်းအထက် ရရှိခဲ့ပါက (နိုင်ငံသားမဟုတ်သည့် အလုပ်ရှင်က လခထဲမှ ဖြတ်နုတ်ထားသည့် အခွန်ဝင်ငွေ မပါ)
သင်သည် ဩစတြေးလျမှ ရာသက်ပန်ထွက်ခွာသွားပါက သို့မဟုတ် အခွန်နှစ်တစ်နှစ်ကျော် ထွက်ခွာသွားပါက
စည်းကြပ်ခွန် ဝင်ငွေစာရင်း တင်ပြရန် သင် သိရှိထားရမည်မှာ -
အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ဘဏ်အကောင့်အတိုးနှုန်း သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှ သင် ဝင်ငွေမည်မျှ ရရှိခဲ့သနည်း
သင့်ဝင်ငွေမှ အခွန်အတွက် မည်မျှနုတ်ထားသနည်း (သင့်အလုပ်ရှင်မှ သင့်လုပ်အားလစာမှ ငွေမည်မျှ နုတ်ထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့ဆီကို ပေးသနည်း)
သင်တောင်းဆိုထားသော ဖြတ်တောက်မှုများနှင့် အခွန်ခုနှိမ်ငွေအကြောင်း
ဖြတ်တောက်ငွေများမှာ သင့်အခွန်လျော့စေရန်အတွက် သင် တောင်းဆိုနိုင်သည့် စရိတ်များ ဖြစ်သည်။ ဖြတ်တောက်ငွေအများစုမှာ အလုပ်နှင့်ဆက်နွှယ်သည့် အသုံးစရိတ်များ ဖြစ်သည်။ ၎င်းငွေမှာ သင် ဝင်ငွေရရှိစေရန် တစ်ခုခုအတွက် အသုံးပြသည့်ငွေ ဖြစ်သည်။ သင် အောက်ပါတို့ကို ပြနိုင်ရမည် -
အသုံးစရိတ်များမှာ ရရှိသည့်ဝင်ငွေနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်
အသုံးစရိတ်များမှာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးစရိတ် မဟုတ်ပါ
သင့်အသုံးစရိတ်များကို သက်သေပြရန် သင့်မှာ မှတ်တမ်း ရှိရမည် (ဥပမာ - ပြေစာ)
သင့်အလုပ်ရှင်မှ သင့်ကို ဝင်ငွေရှင်းတမ်း သို့မဟုတ် ပေးချေငွေ အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် ပေးရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းမှ သင် ဝင်ငွေမည်မျှရရှိသည်နှင့် အခွန်မည်မျှ ဆောင်ခဲ့သည်ကို ပြသပေးသည်။
ကျွန်ုပ် စည်းကြပ်ခွန် ဝင်ငွေစာရင်း တင်ပြရန်လိုအပ်သလား။
သင္၏ အခြန္စည္းၾကပ္ရန္တင္ျပရမည့္ ဝင္ေငြစာရင္းကို မည္သို႔တင္သြင္းမည္နည္း
သင် ကြေညာရမည့် ဝင်ငွေ
သင် တောင်းဆိုနိုင်သော ဖြတ်တောက်ငွေများ
သင်၏ဝင်ငွေရှင်းတမ်းနှင့် ပေးချေငွေအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်ကို ရရှိအသုံးပြုခြင်း
သင်၏ စည်းကြပ်ခွန် ဝင်ငွေစာရင်းကို တင်ပြသည့်အခါ သင့်အနေဖြင့် မှန်ကန်သည့်အခွန်ငွေ ပမာဏကို ပေးချေထားခြင်း ရှိမရှိ ကျွန်ုပ်တို့ စစ်ဆေးပါသည်။ သင့်အား အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှု အသိပေးချက်တစ်စောင်ပေး၍ ရလဒ်ကို အသိပေးပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် သင်တောင်းဆိုထားသည့် ဖြတ်တောက်ငွေများ အတွက် ပြေစာများကဲ့သို့ မှတ်တမ်းများ သိမ်းထားရမည်။ သင်၏ စည်းကြပ်ခွန် ဝင်ငွေစာရင်းကို တင်ပြသည့်နေ့မှစ၍ အနည်းဆုံးငါးနှစ်အထိ ဤမှတ်တမ်းများကို သိမ်းထားရမည်။ ဤမှတ်တမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
myDeductions မှာ သင့်အသုံးစရိတ်များနှင့် ဝင်ငွေမှတ်တမ်း များကို တစ်နေရာထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားရန် အဆင်ပြေသည့် နည်းလမ်းသည်။ the ATO app ကို သင့်စမတ်ဖုန်းထဲ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲထားပြီး myDeductions သင်္ကေတကို ရွေးချယ်ပါ။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် စည်းကြပ်ခွန် ဝင်ငွေစာရင်းကို ပြင်ဆင်ပြီး တင်ပြမည်ဆိုပါက ၎င်းကို အောက်တိုဘာ 31 ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားတင်ပြရမည်။ သင်သည် ပထမအကြိမ် အခွန်ကိုယ်စားလှယ်ကို အသုံးပြုပြီး နောက်နှစ်တွင် အခြားကိုယ်စားလှယ်ကို အသုံးပြုထားပါက ၎င်းတို့ထံ အောက်တိုဘာ 31 ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား ဆက်သွယ်ရပါမည်။
သင်၏စည်းကြပ်ခွန် အခွန်စာရင်းကို မတင်ပြဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ကို သင်ပေးရန်ကျန်သည့် ပမာဏကိုမပေးချေပါက သင်သည် ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင်ရနိုင်ပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် သင်၏စည်းကြပ် အခွန်စာရင်းကို myTax ကို အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းမှ တင်ပြနိုင်ပါသည်။ ၎င်းမှာ အွန်လိုင်းမှ တင်ပြရန်အတွက် မြန်ဆန်၊ လွယ်ကူပြီး လုံခြုံသည့် နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။
myTax ကို အသုံးပြုရန် သင့်အနေဖြင့် ပထမဆုံး myGov အကောင့်တစ်ခု ဖွင့်ရမည်ဖြစ်ပြီး သင့်အကောင့်ကို ATO အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများသို့ ချိတ်ဆက်ရမည်။
သင်၏ပထမ စည်းကြပ်ခွန် အခွန်စာရင်း တင်ပြခြင်း
သင့်အနေဖြင့် သင်၏စည်းကြပ်ခွန် အခွန်စာရင်းကို ပြင်ဆင်တင်ပြရန်အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အခွန်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် ၎င်းတို့ထံ အောက်တိုဘာ 31 ရက်နေ့ မတိုင်မီ ဆက်သွယ်ရပါမည်။ သင့်အနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အခွန်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ကို ရှာနိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အခွန်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးနိုင်သည်။
မှတ်ပုံတင်ထားသည့် အခွန်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနှင့် တင်ပြခြင်း
သင်၏စည်းကြပ်ခွန် အခွန်စာရင်းကို တင်ပြရန် အကူအညီ လိုအပ်ပါက Tax Help အစီအစဉ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Tax Help မှာ ATO သင်တန်းဆင်း အသိအမှတ်ပြု ရပ်ရွာလုပ်အားပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှ လူများအား myTax ကို အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းမှ ၎င်းတို့၏ စည်းကြပ်ခွန် အခွန်စာရင်း ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် အခမဲ့ အတွင်းရေးလျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှု ပေးပါသည်။
၎င်းကို ဇူလိုင်လမှ အောက်တိုဘာလအထိ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ မြို့တော်ကြီးများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာနယ်မြေများအားလုံးတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်.
Tax Help အစီအစဉ်
If you or your employees don't speak English well and needasimple overview of tax in Australia, read our publication Tax in Australia: what you need to know – Burmese translation.
Last modified: 22 Sep 2020QC 63664